I-MOLOCO Cloud: Idatha eqhutywa yidatha, isisombululo seAd Martech Zone
I-MOLOCO Cloud liqonga lokuthenga oluzenzekelayo le-ad inventri kwihlabathi liphela elitshintshayo lenkqubo kunye nothungelwano lwentengiso lwangaphakathi nohlelo. Ngoku ifumaneka njengeqonga elisekwe lilifu kubo bonke abathengisi bohlelo lokusebenza, iMOLOCO Cloud inikwe amandla yitekhnoloji yokufunda umatshini enika amandla abathengisi abahambahambayo ukuba basebenzise idatha yeqela lokuqala kunye neempawu zomxholo ezivela kuyo yonke inkqubo ye-ecosystem ukuze zenze ngokuzenzekelayo imikhankaso yentengiso esekwe kwiintlobo ezahlukeneyo ukusebenza kweemetriki.
Iimpawu zeLifu le-MOLOCO zibandakanya
tshintshano -Fikelela kwintengiselwano yentengiso eshukumayo kubandakanya i-MoPub (inkampani ye-Twitter), iFyber, i-Vungle, i-AdColony, iChartboost, iTapjoy, i-LINE, kunye nokunye.
Isilungisi seBhidi -Isixhobo esitsha kraca esiguqula ngokuzenzekelayo izixa zebhidi zeefandesi zexabiso lokuqala ngexesha lokwenyani ukuze abathengisi bakwazi ukufezekisa iinjongo zabo ngelixa beqinisekisa ukuba abahlawuli ngaphezulu.
Iibhidi zeNkqubo -Lungisa ngokuzenzekelayo ukwandisa ukucofa, ukuguqula, ukufakela, imicimbi ye-in-app, ukubuyela kwinkcitho yentengiso, okanye ezinye iinjongo ezibekwe ngumthengisi.
Nciphisa ukuKhangelwa kweNtengiso (LAT) Ukujolisa -Ukuvumela abathengisi ukuba bajolise kwi-iOS nakwizixhobo ze-Android ezenze ukuba i-LAT isebenze, ngaphandle kokuba akukho datha yokulandela umkhondo wentengiso eyenziweyo. Umsebenzi usebenza ngokujolisa kubasebenzisi ngokusekwe kwimiqondiso yemixholo evela kwiseshoni yangoku yeapp, inqanaba lesixhobo, ulwazi lwenqanaba leapp, kunye nezinye iiparameter, ezifumaneka kubambiswano kunye nemithombo yokuxhasa esekwe kwi-SDK efana neFyber. Ukulandela umkhondo kwe-LAT kwenza ukuba abathengisi bagcine ukusebenza kwabo nasemva kokuba iApple yenze isikhombisi sayo sababhengezi (IDFA) Khetha ukungena endaweni yokuphuma kubasebenzisi.
I-MOLOCO Cloud yenza abathengisi abahambahambayo bakwazi ukukhomba abaphulaphuli ukuba kunokwenzeka ukuba baqhube imbuyekezo yeshishini labo kwihlabathi liphela elikhokelayo kuthungelwano lwee-in-app, kunye neendawo zentengiso:
Yandisa umyalezo wakho kwizigidi ezi-2.5 zeapps
Fikelela ngaphezulu kwezigidi ezi-4 zezixhobo zehlabathi kwaye ukhulise umgangatho womsebenzisi
Fumana abasebenzisi, uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde usebenze, ucebise, kwaye wandise ixabiso lokuphila.
Yenza umngeni kwimbuyekezo kwinkcitho yentengiso (ROAS) ekujoliswe kuko ngokukhupha amandla edatha yakho
Abathengisi bohlelo lokusebenza bafumana ulawulo olupheleleyo kwimisebenzi yentengiso yenkqubo ngokungafihlisiyo kwidatha yephulo labo kunye nokusebenza, kubandakanya idatha yenqanaba lokungena elingabelwanga ngamanye amaqonga ebango.
Qalisa kwi-MOLOCO Cloud
tags: iintengisoI-AdColonyaikukubhadla okungeyonyaniibhidi yokwenzaIdatha eqhutywa yidatha iyathengaUFyberIinethiwekhi zentengiso ye-in-appIntengiso yangaphakathi nohleloUkujolisa kamvaNciphisa ukujonga umkhondo wentengisoI-ltvyokufunda umatshiniizisombululo zentengiso eziphathwayoIintengiso zeapp mobileintengiso yesoftwareUMolocoilifu lemocoInkqubo yentengisobuyela kwintengisoukugqumaIthebhu